कविता: विवश मान्छे | जनदिशा
साहित्य साहित्य कला/मनोरन्जन
कविता: विवश मान्छे
Sahas October 2, 2020	No Comments LiteratureNepali literature
कुटिएको छ मान्छे,
लुटिएको छ मान्छे
खुला आकाश मुनि,
बाच्न विवश छ मान्छे !!
धर्तिको एक टुक्रा भूगोल,
प्रकृतिको अनुपम उपहार
सगरमाथाको शिर पाएर पनि,
निहुरिन विवाश छ मान्छे !!
धर्ति माताको छाती चुस्दै,
ब्वासाहरुले मुखमा रगत लतपताएर
फोस्रो भाषणमा चिच्याउँदा पनि,
कान छोपी सुन्न विवश छ मान्छे !!
मृत छ कानुन, मृत छ सरकार,
मृत छ राज्यसत्ता यहाँ
संस्कृति, कला र इतिहास मेट्दै
आफूले आफैलाई बिर्सदै बिर्सदै,
बस्न विवश छ मान्छे !!
इतिहासकै असभ्य राजनैतिक दाउपेचभित्र,
बर्षभरी गाइजात्रा आए जस्तो गरि
सरकारको रमिते कार्यकौशलता देखेर,
ताली ठोकी ठोकी हास्न विवश छ मान्छे !!
Previous Previous post: भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका नेता राहुल गान्धी गिरफ्तार
Next Next post: नेकपामा फेरी खटपट, शनिबार सचिवालय बैठक बस्ने